‘लकडाउन अन्त्य गर्दा झन् जोखिम बढ्यो’
‘लकडाउन अन्त्य गर्दा झन् जोखिम बढ्यो’ आयोमेल सर्वेक्षण
आयोमेल संवाददाता काठमाडौं - शुक्रबार, साउन १६, २०७७
सरकारले असार ६ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी एक्कासि ‘लकडाउन’ अन्त्य भएको घोषणा गर्‌यो।
सरकारले कारण देखायो- असार ६ गतेसम्म आइपुग्दा परीक्षण स्वाट्टै घट्यो।
चैत ११ गते लकडाउन घोषणा भएपछि असार ६ सम्मको अवधिमा कुनै दिन ७ सयभन्दा बढीमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
तर, असार ६ गते नजिकिँदै गर्दा त्यो संख्या १ सयभन्दा पनि मुनि थियो।
सुरुमा उपत्यकाबाहिर संक्रमित देखिएका थिए।
र, जब लकडाउन सकियो, संघीय राजधानी काठमाडौंमा भने संक्रमित बढेको बढ्यै छन्।
राजधानीकै अस्पतालमा संक्रमितहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ।
सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्न कुनै ‘विकल्प’ बाहिर ल्याएको थिएन, जसरी ‘लकडाउन’ घोषणा गर्दा ल्याएको थिएन।
र, यसरी अचानक सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्ला भनेर सर्वसाधारणले सायदै कल्पना गरेका थिए।
यद्यपि, लकडाउन सकसले सर्वसाधारण नसताइएका होइनन् तर, पनि सरकारले न कुनै मोडालिटी बनायो न कुनै विकल्प दियो।
सुरुमा लकडाउन गरिदियो, त्यसपछि खोलिदियो बस्।
आयोमेलले यसै सन्दर्भमा आफ्ना पाठकमाझ एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो।
‘सरकारले एक्कासि लकडाउन अन्त्य गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न सोधेरआयोमेलले सरकारको कदमबारे आमपाठकसँग बुझ्न खोजेको थियो।
त्यसका लागि सर्वेक्षणमा सहभागीका लागि चार विकल्प रोज्न भनिएको थियो।
पहिलो, ‘ठिक हो’ भन्ने विकल्पमा १३.३३ प्रतिशतले आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, दोस्रो ‘केही समय लकडाउन हुनुपर्थ्याे' भन्ने विकल्पमा २६.६७ प्रतिशतले मत दिएका छन्।
‘झन् जोखिम बढ्छ’ भन्ने विकल्पमा सबैभन्दा धेरैले मत दिएका छन्।
यो तर्कमा करिब ३३.३३ प्रतिशत मतदाता सहमत भएका छन्।
र, २६.६७ प्रतिशत मतदाताले ‘सरकार गम्भीर भएन’ भन्नेमा सहमति देखाएका छन्।
यो सर्वेक्षणका लागि आयोमेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि पाठकको मत जान्न चाहेको थियो।
सात दिनसम्म मत व्यक्त गर्न पाइने हाम्रो सर्वेक्षणमा आयोमेलका ७ सयभन्दा बढी पाठक सहभागी भएका छन्।
प्राविधिक कारण फेसबुकमा भने दुईवटामात्रै विकल्प दिइएको थियो।
ओयोमेलको आधिकारिक फेसबुक पेजमा ९४ भोट प्राप्त भएका छन्।
त्यसमा करिब ८८ प्रतिशतले ‘झन् जोखिम बढ्छ’ भन्ने वकिल्पमा मत व्यक्त गरेका छन् भने बाँकी (१२प्रतिशत) ले ‘ठिकै हो’ भनेका छन्।
त्यस्तै आयोमेलको ट्विटरमा गरिएको त्यही सर्वेक्षणमा २२ मत आएको छ।
तीमध्ये ‘सरकार गम्भीर भएन’ भन्ने विकल्पमा ४०.९ प्रतिशत, ‘झन् जोखिम बढ्छ’ भन्नेमा २७.३ प्रतिशत, ‘केही समय लकडाउन हुनुपर्थ्याे ’ भन्नेमा १३.६ प्रतिशत र ‘ठिक हो’ भन्नेमा १८.२ प्रशितले मत दिएका छन्।
लकडाउनका करिब चार महिना सरकारले केही गरेन। न कुनै काम लाग्दा विकल्प न कुनै योजना। लकडाउन गर्दा पनि त्यस्ता केही विकल्प थिएनन् र एक्कासि लकडाउन अन्त्य गर्दा पनि उस्तै।
बरु लकडाउन गर्दा त्यत्ति धेरै संक्रमित थिएनन्। लकडाउन सकिँदै गर्दा संक्रमित संख्या एकदमै तीव्र गतिमा उकालो चढिरहेको छ।
नसोचिएका र कल्पनै नगरिएका ठाउँमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। मृत्यु दर बढिरहेको छ।
तर, सरकारसँग भने लकडाउन खोल्नुको कुनै विकल्पै थिएन।
आयोमेल संवाददातासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भन्छन्– ‘सधैं बन्द गरेर राख्न सकिन्छ त? सरकारलाई पैसा पनि चाहियो। संक्रमितको उपचारका लागि पैसा जुटाउन लकडाउन खोलिएको हो।’
उनका अनुसार सरकारले धान्नै नसक्ने भएपछि कर उठाउन लकडाउन खोलिएको हो। नत्र, हरेक क्षेत्रमा कर मिनाहा गर्न सरकारलाई निकै दबाब थियो।
नेपालमात्रै नयाँ होइन, विश्वमा धेरै संक्रमण मार खेपिरहेका देशमा पनि यस्तै भएको छ।
त्यहाँ पनि यसरी बिनाविकल्प, बिनायोजना र बिनाकार्ययोजना एक्कासि लकडाउन अन्त्य गर्दा थप असर खेपिरहेका छन्।
आगामी साताको सर्वेक्षणका लागि प्रश्न
-नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा ‘शोषण’ र ‘द‍ुर्व्यवहार’ का घटना किन भइरहन्छन्?
सहभागी हुनका लागि आयोमेलको गृहपृष्ठ जानुहोस्